Semi-kudzima magetsi magetsi vagadziri & vatengesi - China Semi-kudzima magetsi factory
Yakachipa mutengo Zebra inopofumadza Mucheka Neruvara rwePlain
Mbizi inopofumadza Mucheka
Mbizi inopofumadza jira inozivikanwa seye sheer inopofumadza machira, muraraungu inopofumadza machira, dimming roller inopofumadza machira, uye yakapetwa-maviri roller roller inoputira machira kana maviri roller roller inoputira jira, yakabva kuSouth Korea uye inozivikanwa zvakare pasi rese. Iyo mhando yejira haingobatanidze zvakanakira jira uye pajira riya, asi zvakare inosanganisa mashandiro evenetian blinds, roller blinds uye Roman blinds.It inoshandiswa zvakanyanya mudzimba, mahotera, maresitorendi, dzimba dzekuvakira, zvivakwa zvehofisi zvepamusoro-soro uye zvimwe nzvimbo.
Zvichienzaniswa neakawanda zebra inopofumadza machira pamusika, kutaridzika kweGroupeve zebra inopofumadza machira kuri nani, uye mashandiro acho ari nyore.
China Kushongedza Chakavanzika Zebra Bofu Mucheka WeHofisi Hwindo Screen
Mbizi Bofu Mucheka
Zebra inopofumadza, inozivikanwawo seye muraraungu inopofumadza, inopofomadza inopofumadza, yakapetwa-maviri roller roller, masikati nehusiku blinds, nezvimwewo, zvakatangira muSouth Korea uye zvakare vanozivikanwa kwazvo pasirese. Hupamhi hwembizi hwindo chinotenderera inopofumadza machira ndeye 3m, uye icho chinhu i100% polyester.
Kuchengetedza uye kuchenesa kweGroupeve zebra inopofumadza machira ari pazasi:
3. Shandisa jira rakapfava kana chipanji chakanyoroveswa nemvura inodziya kupukuta machira panguva yekubvisa guruva / sterilization. Kana zvichidikanwa, zvinyoro zvinyoro zvinogona kuwedzerwa. Pukuta zvinyoro nyoro kudzivirira kuunyana kana kukuvadza jira. Kupukuta kunogona kuita kuti keteni rive rakachena.
4. Shandisa simbi yesimbi yekumwaya panzvimbo inenge masendimita gumi kubva paketeni rejira, iro rinogona kuita kuti guruva ribviswe / kuvharwa.
China Fekitori Yekupakata Zebra inopofumadza Mucheka Nemakwikwi Emitengo
Mbizi inopofumadza jira inozivikanwa seye sheer inopofumadza machira, muraraungu inopofumadza machira, dimming roller inopofumadza machira, uye yakapetwa-maviri roller roller inoputira machira kana maviri roller roller inoputira machira. Imhando yemucheka wakarukwa kubva pachidimbu chejira chine upamhi hwakaenzana uye mambure akapatsanurwa kubva kune mumwe nemumwe.
Inofananidzwa neyemabhiza mazhinji inopofumadza machira pamusika, mwenje unogadziridzwa mukana wakakura weGroupeve Zebra inopofumadza Mucheka, iyo inogona kusangana nezvinodiwa zvemamiriro akasiyana emwenje, panguva imwe chete, chitarisiko chacho zvakare chiri chakanaka, uye mashandiro acho ari nyore.
Masikati Uye Husiku Matemba maviri Sheer Shades Jira reKumba
Sheer Shades Mucheka
Sheer shades, inozivikanwawo sembizi inopofumadza, inopofomadza inopofumadza, yakapetwa-maviri roller roller, masikati nehusiku inopofumadza, muraraungu inopofumadza, nezvimwewo, zvakatangira muSouth Korea uye zvakare vanozivikanwa kwazvo pasirese. Inoshandiswa zvakanyanya mudzimba, mahotera, maresitorendi, dzimba dzekugara, zvivakwa zvehofisi zvepamusoro-soro uye dzimwe nzvimbo.
1. Vacuum kubvisa uye guruva kubviswa.
2. Shandisa jira rakapfava kana chipanji chakanyoroveswa nemvura inodziya kupukuta machira panguva yekubvisa guruva / sterilization. Kana zvichidikanwa, zvinyoro zvinyoro zvinogona kuwedzerwa. Pukuta zvinyoro nyoro kudzivirira kuunyana kana kukuvadza jira. Kupukuta kunogona kuita kuti keteni rive rakachena.
Yemaitiro eEuropean Rainbow inopofumadza Mucheka 100% Polyester
Rainbow inopofumadza Mucheka
Rainbow inopofumadza, inozivikanwa seye zebra inopofumadza, inopofomadza inopofumadza, yakapetwa-maviri roller roller, masikati nehusiku inopofumadza, nezvimwewo, zvakatangira muSouth Korea uye zvakare vanozivikanwa kwazvo pasirese.
Sezvo isu tese tichiziva, iyo yekumhanyisa mhedzisiro yemuraraungu inopofumadza jira rinonyanya kutemerwa nechinhu. Zvinoenderana nehunhu hwejira, inogona kukamurwa kuita semi-kudzima moto muraraungu inopofumadza machira uye kusviba kwemuraraungu inopofumadza machira.
Sarudzo yekumhanyisa mhedzisiro inonyanya kugadziriswa zvinoenderana nechiitiko chakashandiswa. Hazvina mhosva kuti ndeupi rudzi rwaunoda, isu tinogona kupa yakanakisa zano uye sampuli.
Fekitori Hot Tengesa Dual Sheer Roller Blinds Mucheka WeHofisi
Sheer Roller inopofumadza Mucheka
Sheer roller inopofumadza, inozivikanwawo sembizi inopofumadza, inopofomadza inopofumadza, yakapetwa-maviri roller roller, masikati nehusiku inopofumadza, muraraungu inopofumadza nezvimwe, zvakatangira muSouth Korea uye zvakare vanozivikanwa kwazvo pasirese. Izvo zvinhu zveheer roller inopofumadza machira ndeye 100% polyester.
Iyo haigone chete kuzadzikisa mhedzisiro yeiyo shading, asi zvakare inosangana nezvinodiwa zvekuvhenekera kana vanhu vari kushanda. Inoshandiswa zvakanyanya mudzimba, mahotera, maresitorendi, dzimba dzekugara, zvivakwa zvehofisi zvepamusoro-soro uye dzimwe nzvimbo.Tine zvinhu zvinopfuura mazana maviri mune yedu sheer roller inopofumadza machira bhurocha mharidzo, unogona kuwana ako akanaka mavara mairi.
Yakakwirira Yemhando Yemazuva Uye Husiku Inovhara Maketeni 100% Polyester
Masikati Uye Husiku Anopofumadza Mucheka
Masikati neusiku inoputira machira inozivikanwawo sembizi inopofumadza machira, sheer inopofumadza machira, muraraungu inopofumadza machira, dimming roller inopofumadza machira, uye maviri-rara roller roller inoputira machira kana maviri roller roller inoputira machira.
Masikati neusiku inopofumadza ndeye-maviri-layer blinds. Kupera kwaro kunowanikwa nekupindirana kwejira rejira uye mesh rukoko. Kana iwo mesh akaturikidzana achiwirana, mwenje unonyorova uye iwo wakananga mwenje unoderedzwa kune imwe nhanho. Kana machira akaturikidzana, mwenje unovharirwa zvachose, kuitira kuti pakupedzisira uvharire mwenje. Yese masikati neusiku inopofumadza machira akagadzirwa ne100% polyester, uye isu tine zvitupa zvemachira ese.
Yakakwira Mashandisiro Rate Rate Zebra Shade Mucheka 100% Polyester
Mbizi Shade Mucheka
Mbizi Shade jira inozivikanwa seye sheer inopofumadza machira, muraraungu inopofumadza machira, dimming roller inopofumadza machira, uye yakapetwa-maviri roller roller inoputira machira kana maviri roller roller inoputira machira. Zvinoenderana nehunhu hwejira, inogona kuganhurwa kuita semi-kudzima mbira jira uye jira rembizi nhema.
Inoshandiswa zvakanyanya mudzimba, mahotera, maresitorendi, dzimba dzekugara, zvivakwa zvehofisi zvepamusoro-soro uye dzimwe nzvimbo. Munzvimbo yakavhurika yakaita seyekutandarira uye yekudzidzira imba, kana izvo zvinodiwa shading zvisina kukwirira kudaro, unogona kusarudza semi-blackout zebra inopofumadza. Kana iri yekurara kana odhiyo-inoonekwa imba inoda yakakwirira shading, unogona kusarudza blackout zebra inopofumadza.
Iine yakasimba-mativi emanzwiro uye inodziya. Kana mapofu akavhurwa, unogona kutarisa nzvimbo dzekunze uye mwenje unopinda mukamuri nyoro uye wakasununguka.
Kana keteni rakavharwa, rakasarudzika kubva kunze, kuona zvakavanzika uye kuratidza kureruka uye runako rwemuraraungu mapofu.
Yedu muraraungu inopofumadza machira ndiyo yakanakisa sarudzo yemurarabungu inopofomadza mafekitori kana maresitorera. Tinogona kupa emahara sampuli yemuraraungu inopofumadza jira kune vatengi vedu. Uye yega yega roll yemurarabungu inopofumadza machira anofanirwa kupasa iyo yemhando bvunzo isati yatumirwa.
Multi-mavara Zebra Mucheka 100% Polyester Kune Villas
Mucheka weZebra unozivikanwa seye sheer inopofumadza machira, muraraungu inopofumadza machira, dimming roller inopofumadza machira, uye yakapetwa-maviri roller roller inoputira machira kana maviri roller roller inoputira machira. Zvinoenderana nehunhu hwejira, inogona kuganhurwa kuita semi-kudzima mbira jira uye jira rembizi nhema.
Munzvimbo yakavhurika yakaita seyekutandarira uye yekudzidzira imba, kana izvo zvinodiwa shading zvisina kukwirira kudaro, unogona kusarudza semi-blackout zebra inopofumadza. Iyo haigone chete kuzadzikisa mhedzisiro yeiyo shading, asi zvakare inosangana nezvinodiwa zvekuvhenekera kana vanhu vari kushanda. Kana iri yekurara kana odhiyo-inoonekwa imba inoda yakakwirira shading, unogona kusarudza blackout zebra inopofumadza. Hazvina mhosva kuti ndeipi yaunosarudza kusarudza, tinogona kupa yakanakisa zano uye masampuli.
Nyowani Chimiro Rainbow Inopofumadza Mucheka Semi-Kusviba
Rainbow inopofumadza, inozivikanwa seye zebra inopofumadza, inopofomadza inopofumadza, yakapetwa-maviri roller roller, masikati nehusiku inopofumadza, nezvimwewo, zvakatangira muSouth Korea uye zvakare vanozivikanwa kwazvo pasirese. Imhando yemucheka wakarukwa kubva pachidimbu chejira chine upamhi hwakaenzana uye mambure akapatsanurwa kubva kune mumwe nemumwe. Iine yakasimba-mativi emanzwiro uye inodziya. Izvo zvinhu zvemuraraungu zvinopofumadza machira ndeye 100% polyester.
Inofananidzwa neakawanda muraraungu inopofumadza machira pamusika, mwenje unogadziridzwa mukana wakakura weGroupeve Zebra Blinds Fabric, iyo inogona kusangana nezvinodiwa zvemamiriro akasiyana emwenje, panguva imwe chete, iyo chitarisiko zvakare yakanaka, uye mashandiro acho ari nyore.
Hunhu Guarantee Yakasimba Mbizi Mucheka 100% Polyester Semi-kudzima magetsi
Mbizi inopofumadza jira inozivikanwa seye sheer inopofumadza machira, muraraungu inopofumadza machira, dimming roller inopofumadza machira, uye yakapetwa-maviri roller roller inoputira machira kana maviri roller roller inoputira machira. Zvinoenderana nehunhu hwejira, inogona kuganhurwa kuita semi-kudzima mbira jira uye jira rembizi nhema.
Iyo haingobatanidze chete zvakanakira jira uye mesh, asi zvakare inosanganisa mashandiro evenetian blinds, roller blinds uye eRoma blinds. Inoshandiswa zvakanyanya mudzimba, mahotera, maresitorendi, dzimba dzekugara, zvivakwa zvehofisi zvepamusoro-soro uye dzimwe nzvimbo.